आजको समाचार: अब एनसेलले कति रकम लाभकर तिर्नुपर्छदेखि मैदानबिना कसरी होला एक दिवसीय टी–२० श्रृंखला? – MySansar
आजको समाचार: अब एनसेलले कति रकम लाभकर तिर्नुपर्छदेखि मैदानबिना कसरी होला एक दिवसीय टी–२० श्रृंखला?
Posted on February 6, 2019 February 6, 2019 by राजेन्द्र मगर
आज माघ २३ गते बुधवार बिजमाण्डुले Bizmandu Breaking: एनसेल बिक्रीको लाभकर एक्जिएटा र एनसेलबाट असुल्न सर्वोच्चको परमादेश भन्दै समाचार लेखेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलाशले सर्बोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर उठाउन एनसेल र एक्जियटाको नाममा परमादेश दिएको हो। अदालतको फैसला अनुसार अब अदालतले कर असुली गर्नु पर्नेछ।
एनसेलले सबैभन्दा पहिलो लाभकर आफ्नो दायित्व नभएको र लाभकरकै कारण लाभांश रोक्न नमिल्ने भन्दै रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले लाभकरको विषयलाई पूर्ण इलसासमा पठाउने रायसहित लाभांश लैजाने बाटो खोलिदिएको थियो। यसअधिका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले लाभांश रोक्न नमिल्ने आदेश गरेका थिए।
एनसेलको रिटपछि पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल समेत पाँच जनाले रिट दायर गरेका थिए।
अब एनसेलले १४ अर्व ३६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ थप कर बुझाउनुपर्छ। र यसरी बुझाउन बाँकी रहेको रकमको झण्डै साढे दुई वर्षको १५ प्रतिशतका दरले व्याज समेत बुझाउनुपर्छ। ठूला करदाता कार्यालयले दिएको जानकारीको आधारमा एनसेलले अब करिव २० अर्व रुपैयाँ हाराहारीमा कर बुझाउनु पर्ने सम्भावना देखिएको छ।
सर्वोच्चको फैसला : अब एनसेलले कति रकम तिर्नुपर्छ? भन्दै पहिलोपोस्टले लेखेको छ।
एनसेलको मुद्दामा आज अदालतले परमादेश जारी गरेपछि एनसेलसँग जोडिएका अरु तीन थान मुद्दा के होला भन्ने बारेमा पनि चासो उठेको छ। एनआरएनका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतोदेखि एनआरएन निरज गोविन्द र एनसेल आफैले बेरुजुविरुद्ध हालेको मुद्दा विचराधीन छ।
अब के होला सर्वोच्चमा विचाराधीन एनसेलका तीन मुद्दा? भन्दै नेपाल लाइभले लेखेको छ।
सांसदमा आज संसदहरुले गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलसँग सवाल जवाफ गरे। निर्मला हत्या प्रकरण लगायत विषयमा सांसदहरुले गृहमन्त्री थापालाई प्रश्नहरु सोधेका थिए। निर्मलाको हत्यारा कहिले पत्ता लाग्छ ? अनुसन्धान कहाँ पूग्यो ? घटनास्थलको प्रमाण किन नष्ट गरियो ? यस्तै यस्तै।
कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले त पन्तको बलात्कार तथा हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गरी मुद्दा किन चलाइएन भनेर प्रश्न सोधेकी थिइन्।
संसदमा गृहमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर : विपक्षीको प्रश्नैप्रश्न, नेकपाको बधाई ! भन्दै अनलाइन खबरले समाचार लेखेको छ। प्रश्नोत्तरकै विषयमा पहिलोपोस्टले ‘कुन पेस्तोलले कति दुरीमा प्रहरीमाथि आक्रमण भयो? अपराधीबाट कुनै फायर भएको छैन’ भनी प्रश्न गर्दा गृहमन्त्री नाजवाफ भएको भिडियोसहितको समाचार इन्काउन्टरबारे कँडेलको त्यो प्रश्न जसले गृहमन्त्रीलाई संसदमा एकछिन जवाफविहीन बनायो शीर्षकमा लेखेको छ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले शान्तिपुर्ण प्रर्दशनका क्रममा आफ्ना विद्यार्थी नेताहरु नियन्त्रणमा लिई फौजदारी मुद्दा चलाइएको भन्दै गम्भीर आपत्ती जनाएको छ। पोखरामा पक्राउ परेका नेपाल विद्यार्थी संघका परशुराम बस्नेत, डिफान भुजेल र विनय पौडेललाई फौजदारी मुद्दा चलाईएकोमा कांग्रेसले आपत्ती जनाएको हो।
कांग्रेसले प्रहरी नियन्त्रण रहेका विद्यार्थी नेताहरुलाई तत्काल रिहाई गर्न पनि माग गरेको छ।
नेविसंघका नेताहरुलाई फौजदारी मुद्दा लगाएकोमा कांग्रेसको आपत्ति भन्दै नेपालखबरले लेखेको छ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भारतीय श्रमिकले नेपालमा काम गर्दा श्रम स्वीकृति लिनु पर्ने भन्दै परिपत्र गर्ने व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका प्रमुखलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। विभागका निमित्त महानिर्देशक उदय गुप्तालाई यस बारेमा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण मागेको हो। गुप्ताले मन्त्रालयको महाशाखामा विषयको गम्भीरता नबुझी पत्र काटेको र आफूबाट गल्ती भएको भन्दै लिखित स्पष्टीकरण बुझाएको देशसञ्चारले लेखेको छ।
सवारी चलाएको समयमा चालकले मोबाइल फोन प्रयोग र मापसे गरे कारबाहीको नयाँ मापदण्ड जारी गर्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ संशोधन गरेर उक्त मापदण्ड ल्याउने भएको हो ।
विभागले २६ वर्षअघिको ऐनमा समायानुकुल संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको हो।
चालकलाई मोबाइल फोन प्रयोग र मापसे कारबाहीको नयाँ मापदण्ड आउँदै भन्दै बाह्रखरीले लेखेको छ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरकी सहायक रजिष्ट्रार गीता कुमारी पन्थीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। उनी सेवाग्राहीलाई राजश्व कम गरिदिने भन्दै १ लाख घुस लिएको अवस्थामा पक्राउ परेकी थिइन्।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयकी सहायक रजिष्ट्रारविरुद्ध १ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भन्दै खबरहबले लेखेको छ।
मैदानबिना कसरी होला एक दिवसीय र टी–२० श्रृंखला? भन्दै क्रिकेट मैदानको अभावको बारेमा सेतोपाटीले लेखेको छ, ‘त्रिवि मैदानले मात्रै धानेको नेपाली क्रिकेटको साख जोगाउन अब कहिलेसम्म सो मैदानमा मात्रै भर पर्ने हो? यसको उत्तर नेपाली क्रिकेटका जिम्मेवार पदाधिकारीसँग छैन। हरेक चार वर्षमा पिचको मर्मत गर्नुपर्दछ। तर, त्रिवि मैदानको पिच आठ वर्षसम्म पनि मर्मत नहुँदा यसको गुणस्तर खस्किएको छ ।
यसैबीच नेपालमा एक दिवसीय श्रृंखला खेलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर भर्खरै अध्ययन भने शुरु भएको छ। एकदिवसीय मान्यता पाएपछि नेपालले पनि घरेलु मैदानमा श्रृंखलाको आयोजना गर्न चासो दिइरहेको छ। तर, क्रिकेटको आधिकारिक निकाय नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) निलम्बनमा रहेको छ भने एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय भनिएको कीर्तिपुर मैदान पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाले नेपालमै तत्काल श्रृंखला आयोजना गर्ने अवस्था छैन।’
नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको छाउनीस्थित वीरेन्द्र अस्पतालको निरिक्षण गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज सो अस्पताल पुगेको रातोपाटीले लेखेको छ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घले सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धमा दिएको अन्तरिम आदेशप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको काठमाण्डु प्रेसले लेखेको छ।
1 thought on “आजको समाचार: अब एनसेलले कति रकम लाभकर तिर्नुपर्छदेखि मैदानबिना कसरी होला एक दिवसीय टी–२० श्रृंखला?”
दुधको साक्षी बिरालो भनेझैं यो छोलेन्द्र शमशेर न्यायाधीस भनाउँदोले पहिला पनि लागू पदार्थवाला लाई पनि सफाई दिएको सम्झना छ /
चोरले चोरलाई सहयोग त गर्ने नै भए। kleptocracy – याने कि प्रशाशन राज्य चलाउने हरुले देशको ढुकुटीमा चोरी गर्ने इतिहास बोकेको मुलुक। दुइपैसे नेताले बोलेको भरमा बन्द गर्ने , टायर जलाउने , गाडी जलाउने, कुटपिट गर्ने र राष्ट्रिय जनधन तोडफोड गर्ने अति मुर्ख र नपुंसक युवा। शायद यस्ता नालायकको पोल्टामा यस्तैले इन्माथी रजाइ गर्ने भाग्य होला। त्यसैले त अस्ति राणा थिए , हिजो शाह र आजभोली सुजाता र प्रचण्ड तिम्रा पोल्टा र निधार